2019 QLED Design – Beautiful TV on or off | Samsung Myanmar
QLED ရဲ့ ဘေးဘောင် အနားသတ်
အတွင်း အပြင် လှပသေသပ်မှု
ဘေးဘောင် အနားသတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဆက်ကြောင်းအရာမရှိတဲ့အပြင် ကိုယ်ထည်တစ်ခုတည်းဖွဲ့စည်းထားကာ အသေးစိတ် ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ QLED ကို ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ခန့်ထည်စေမဲ့ ဒီဇိုင်းအပေါ်မှာ အဓိကထားပြီး ဖန်တီးထားပါတယ်။
သင့်နံရံတွေကို စိတ်တိုင်းကျ ဖန်တီးလိုက်ပါ။
QLED ရဲ့ မျက်နှာပြင်က Power Off ထားရင်တောင်မှ သင့်ရဲ့ နံရံပေါ်မှာ အလှပန်းချီကားအနေနဲ့ သင်လိုသလို အလှဆင်ပေးမှာပါ
A video showing the various options for Magic Screen.
The 2019 QLED TV carries two new special décor mode options: light grid and linear dot patterns. Basic info mode and photo mode as well. The motion shows how 2019 QLED's Magic Screen smoothly blends into the living room decor.
သင့်ရဲ့ QLED ပေါ်က ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့
အိမ်အတွင်းပိုင်းကို သင့်ရဲ့ TV နဲ့ ရောစပ်ပြီး
သင့်ရဲ့ အမှတ်ရစေမဲ့ အခိုက်အတန့်များကို
QLED ပေါ်မှာ မျှဝေလိုက်ပါ
QLED က ကြိုးများရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိအောင် ကြိုးတစ်ချောင်းတည်းဖြင့် ဖန်တီးပေးထားတဲ့အတွက် ရှုပ်ပွမနေတော့ဘဲ စမတ်ကျကျဖြစ်စေမှာပါ။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ QLED TV နဲ့ နံရံကြားမှာ နေရာလွတ်မရှိဘဲတပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ အိမ်တွင်းကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ရောစပ်ပြီး အလှဆင်နိုင်မှာသေချာပါတယ်။
QLED နဲ့ ဖန်တီးလိုက်ပါ
* Devices must be connected to One Connect Box via HDMI cable.
* No Gap Wall-Mount : Measured from rear end of the TV, the gap may differ based on the installation and wall type.
* Images are simulated and for illustration purposes only. The appearance and design specifications which do not affect product performance are subject to change without notice
* Galaxy users with Galaxy devices previous to the Galaxy S6 and iOS & non-galaxy Android users need to download SmartThings App for Magic screen setting on mobile phone. SmartThings compatible devices may vary by region/country.